Ole ndi bu ndi ulo? | Ngwa Mmekọ Pennsylvania
Ngwa Ndị Mmepe Pennsylvania maka cannabis agaghị adị na nwa oge, mana ị nwere ike gụọ ihe niile nwere ike ịdaba na ya SB 350. Anyị kpuchie usoro na ụkpụrụ nke nwere ike ịbụ otu ụbọchị ikike ikikere Pennsylvania Growers.
Na mkparịta ụka gbara gburugburu Cannabis na Iwu Cannabis emesịa mepee iji nabata echiche na-ese okwu, akụkọ banyere ndị omebe iwu abụọ nke Pennsylvania na-ewebata ụgwọ iwu iji nye marijuana ntụrụndụ abịabeghị ihe ịtụnanya. Ndị omeiwu Bill 350 nke bu n’uche imebi marijuana ntụrụndụ, ndị ndị omebe iwu steeti Sharif Street na Daylin Leach webatara na Harrisburg na Tuesday.
Leach kwenyere na ọ bụrụ na akwadoro ya, na ụgwọ ahụ ga-emecha nwee ike idobe ahịa ojii a na-echekwa ma mee ka usoro ị mariụ wii wii dị na steeti. Billlọ omebe iwu Bill 350 nwere ụfọdụ echiche na iwu dị mkpa maka ndị mmadụ na-achọ nnabata iji too Cannabis maka ojiji nkeonwe ma ọ bụ nke azụmahịa. Isiokwu a kọwara nke ọma ihe niile metụtara ndị Pennsylvania Ndị na-eto eto ngwa yana iwu ahụ Bill na-achọ ịmanye Ndị na-akụ.
Ole ndị bụ Ndi na asa-ulo, ndi n’ahu ulo?
Iji ghọta Senatelọ Ome Iwu Bill 350, ọ dị mkpa ịghọta echiche n’azụ usoro atọ nke ndị na-emepụta hemp na-emepụta ihe atụpụtara: Ndi ulo, Microgrowers, na Ndị na-akụ.
Dabere na Omeiwu Bill 350, oge Ndi ulo na-ezo aka na ndị ọrụ Ngalaba kwere ka ọ na-eto cannabis maka iji aka ya. Usoro ahụ Microgrowers ejiri ya zoo aka na ndị ngalaba nyere ikike ka ọ na-eto wii wii n'ụlọ ka ere ya na ngalaba ma ọ bụ ihe eji eme ya. Thirddị nke atọ, akpọrọ Ndi nwere nkpa, gunyere ndi mmadu, ndi otu ha, ndi ulo oru ha, ndi ha na ha na ndi ha na ha mekoro iru, ihe ha nwere ihe kariri akari ahiri kariri 150,000 ma obu uzo ulo.
Billgwọ a tụrụ atụtara na-etinye iwu siri ike na Ndi nwere nkpa, na edemede a ga-elekwasị anya na otu ụdị nke Ndị na-akụ.
Ingghọta echiche nke Growers, Microgrowers, na ụlọ ụlọ
Billkpụrụ a tụrụ aro mere ka ọdịiche dị n'etiti echiche nke ndị na-eto eto, umu igbo, na ndi ulo.
Dị ka ụgwọ a chọrọ, ndị ọnụ ọgụgụ ha dum buru ibu karịrị 1,50,000 square ohere nke mpụga ma ọ bụ 60,000 square ụkwụ nke ime ụlọ ga-adaba n'okpuru otu nke Gndị ọkwọ ụgbọ mmiri. Ndị Ngalaba kwere ka ha na-eto cannabis maka nzube ma ọ bụ ka e resị ya onye ga-akwụ ụgwọ ga-adaba n'okpuru otu. 'Microgrowers. " N'ikpeazụ, ụgwọ ahụ kọwara 'Ndi oru ulo' dika mmadu obula nke Ngalaba weputara ka o toba cannabis maka oji onwe ya.
Ọ dị mkpa ịghọta ihe dị iche na ngalaba atọ ndị a dịka mmachi na ikike amabigoro ụdị niile dịgasị iche iche. Isiokwu a na-elekwasị anya na iji ihe ndị metụtara Usoro ntinye nke Pennsylvania Homegrower, dị ka ụgwọ iwu ọhụrụ ahụ tụpụtara, yana mgbochi mgbochi nke ụgwọ ahụ achọrọ na-etinye ndi ulo.